ခဲပုံစံများသေနေပြီလား | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 23, 2016 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Jenn Lisak Golding
အနည်းဆုံးတော့အစဉ်အလာအရအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၊ “ ရိုးရာ” ဆိုတာကသင်တန်ဖိုးကိုမပေးမီ၊ သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသောတည်ငြိမ်သောအကြောင်းအရာများကိုမက်လုံးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးမပြုခင် visitors ည့်သည်များ၏အချက်အလက်များကိုတောင်းဆိုခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းစကားဝိုင်းများကိုတိုးမြှင့်ပေးရာတွင်ကူညီရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရာ ဦး ဆောင်မှုပုံစံများကိုဖြည့်စွက်သော web visitors ည့်သည်များသိသိသာသာတသမတ်တည်းကျဆင်းခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ အကြောင်းကောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။
ရလဒ်အနေဖြင့်, သင်၏ဝယ်ယူသူများသည် ပို၍ သိကျွမ်းသောပညာ၊ အားလုံးမှာသူတို့ပါပဲ ငြိမ်အကြောင်းအရာနှင့်လုံးလုံး unimpressed ၎င်းသည်သူတို့၏လိုအပ်ချက်များ၊ အကျိုးစီးပွားများသို့မဟုတ်သူတို့ဝယ်ယူသောခရီးတွင်မည်သည့်နေရာ၌ရောက်နေသည်ဖြစ်စေအမှတ်အသားကိုလွဲချော်စေသည်။
မကြာမီကကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သော Gated content (စာရွက်စာတမ်းများနှင့် ebooks များကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှုသည်) ယခုတစ်စုံတစ် ဦး ၏အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အလွန်မက်မောဖွယ်ရာမက်လုံးများဖြစ်လာသည်။
အကယ်. သင်က သင်၏ဝဘ်ဆိုက်ကိုတစ် ဦး အနေဖြင့်စဉ်းစားပါ ဒီဂျစ်တယ်အရောင်းကိုယ်စားလှယ် ခဲပုံစံများဖြင့်ဖြန်းထားသောတည်ငြိမ်သောအကြောင်းအရာများကို (သင်လုပ်သင့်သည်အတိုင်း) သည်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်နှင့်စကားပြောနေသည်။ သူသည်စကားဝိုင်းကိုဖျက်ပစ်လိုက်သည်၊ ပြတ်တောက်သွားသည်ဟုထင်မှတ်ကာသူ၏လမ်းကြောင်းမှဖြတ်သွားသောမည်သည့်အလားအလာမျိုးကိုမဆိုအသံမကြားသောအသံကိုပေးသည်။ မေးခွန်းများမေးသော၊ နားထောင်ပြီးအထောက်အကူပြုသောအဖြေပေးသောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ်အရောင်းစာရေးအဖြစ်မှတ်မထားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်၊ ၎င်းသည်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအရာများပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများသည်ပြောင်းလဲမှု ၉၄% ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေသည် အရင်းအမြစ်
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာသည်စားသုံးသူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု ၃၀၀% ပိုမိုမြင့်မားစေသည် အရင်းအမြစ်
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများသည် ၆၀% ပိုမိုသောအချက်အလက်များကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ အရင်းအမြစ်
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများသည်စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက် ၅၀၀% ပိုထုတ်ပေးသည်။ အရင်းအမြစ်
ကျွန်ုပ်၏စိတ် ၀ င်စားမှုများနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်ဝယ်ယူနေသည်ဆိုသောအချက်အလက်များသည်နေရာတိုင်း၊ လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်စေရန်ပြုလုပ်ထားသောတည်ငြိမ်သော၊ (လူတိုင်းကိုစိတ်ကျေနပ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။ ဒါကမကောင်းဘူး။ )
အာရုံကြောသိပ္ပံပညာရှင်များကကျွန်ုပ်တို့အား“တွားသွားသတ္တဝါ"(သတိလစ်နေသည့်အပြုအမူကိုမောင်းနှင်နေသည့် ဦး နှောက်၏အမည်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်နောက်ဆုံးပြောဆိုချက်သည်) အလွန်အမင်းဖြစ်သည် မြင်သာသောနှင့်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုချို့တဲ့အကြောင်းအရာဝေးလျော့နည်းထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
ဤနောက်ဆုံးအချက်ကိုထောက်ခံရန်သို့ရာတွင်အနည်းငယ်ပြောကြားချက် - ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အားစာရွက်ဖြူတစ်လုံးအပေါ်တွင် infographic ကိုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုစီပြုလုပ်ပြီးတစ်ခုစီသည် ဦး ဆောင်ပုံစံနောက်ကွယ်တွင်ထိုင်ကြသည်။ စာရွက်အဖြူသည်ပြောင်းလဲမှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီး infographic သည်တင်ပြမှု၏ ၁၀၀% ကိုရိတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ကြောင်းတွားသွားသတ္တဝါ ဦး နှောက်အရေးယူချင်ပါသလား? သင်၏အကြောင်းအရာကို Pete အတွက်ဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။
ခေတ်မမီတော့သောပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကြောင်းကိုမြုပ်ရန်အမှုသည်ပုံစံများကိုလုံး ၀ သတ်ပစ်ရန်မဟုတ်ပါ အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများဆီသို့ဖောက်သည်များလှည့်စား သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေခြင်းကဲ့သို့သောပိုမိုကြီးမားသောကတိက ၀ တ်ကိုမတောင်းဆိုခင်၎င်းတို့သည်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ပြီးတန်ဖိုးကိုရရှိစေသည်။ (ဒုတိယနေ့ရရှိရန်သင်မျှော်လင့်ခဲ့လျှင်သင်ရက်စွဲတစ်ခုတွင်ပြုမူသကဲ့သို့)
ဥပမာ interactive အကြောင်းအရာ ပါဝင်:
ရက်ချိန်းစီစဉ်သူ - ရက်ချိန်းယူခြင်းအားဖြင့်စမ်းသပ်မောင်းနှင်မှု၏အင်္ဂါရပ်များသို့မဟုတ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအလားအလာများဖိတ်ခေါ်ပါ
အကဲဖြတ် - ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များကိုချဲ့ပြီးအထောက်အကူပြုသောအကြံပြုချက်များကိုပေးပို့ပါ
ဂဏန်းတွက်စက် - ၀ ယ်ယူသူများတန်ဖိုးကိုတွက်ချက်ရန်ကူညီပါ
chat - ၁: ၁၊ ၀ ယ်ယူသူသည်ဝယ်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်သကဲ့သို့အချိန်နှင့်တပြေးညီအထောက်အပံ့
စိတ်ကြိုက် Path / အထူးနှုန်းများ - ဝယ်သူ ဦး စားပေးမှုများ၊ သမိုင်းသို့မဟုတ်ရွယ်တူချင်း ၀ ယ်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ စိတ်ကြိုက်ကိရိယာများ၊ အကြံပြုချက်များသို့မဟုတ်အထူးနှုန်းများ
ချက်ချင်းစစ်ဆေးပါ - ဝယ်ယူနိုင်သောအတားအဆီးများကို၎င်းတို့ဝယ်ယူခြင်းရှိမရှိကိုရှင်းလင်းခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပါ
လက်ငင်း Win - မက်လုံးများကိုသိလိုစိတ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ
Interactive မှ Infographics - ရွေ့လျားမှုကဲ့သို့သောအပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သောဒြပ်စင်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပုံသဏ္icsာန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်များ၊
တစ် ဦး tweet / လူမှုရေးဝေစုနှင့်အတူပေးဆောင် - သင်၏ဆိုရှယ်မီဒီယာကွန်ယက်နှင့်သင်၏အကြောင်းအရာကိုမျှဝေသည့်အခါ visitors ည့်သည်များအား ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူအားဆုချပါ
ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိ - visitors ည့်သည်များသည်သူတို့၏ဗဟုသုတကိုစမ်းသပ်ခွင့်ပြုပါ
ပုံပြင် Microsites - pages ည့်သည်ကိုစာမျက်နှာများနှင့်ဗီဒီယိုများမှတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းခြင်းသို့ကူးပြောင်းသောအွန်လိုင်းမိုက်ခရိုဆိုက်များ
အသေးအဖွဲ - သူတို့၏သိလိုစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပြီးသူတို့ဘယ်လောက်သိသည်ကိုပြပါ
ဗီဒီယို - ပြပွဲ vs. ပြသပါ
သင်၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများကိုစီစဉ်သောအခါစိတ်ထဲထားရှိရန်သည်အသုံးဝင်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယာဉ်မောင်း ကြောင်း visit ည့်သည်အရေးယူနှင့်အကြောင်းအရာစားသုံးမှုလောင်စာ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆွေများထံမှချေးယူထားသောစာရင်းအနည်းငယ်ဖြစ်သည် ခဲပုံစံများသေပြီ:
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ထဲမှာတူလိမ့်မည်ဟုအဘယ်သို့သောအပေါ် fuzzy နေဆဲ? ဒီမှာပါ အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်, သင်သည် "tweet နှင့်အတူပေးဆောင်" နိုင်အောင်သင်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ခဲ - မျိုးဆက်လမ်းကြောင်းကိုတစ်အရသာရ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းလမ်းများမခွဲမီကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကို virtual high-ငါးကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးပေးချင်ပါသည် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောမိတ်ဖက်များPERQ မှ Muhammad Moham Yasin နှင့် Felicia Savage တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့အဖွဲ့သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်အရောင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်စိတ်ကူးကောင်းသော၊ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည် ထွက်ခွာသည် နှင့်သရုပ်ပြ, Stat.
မည်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာများရှိပါကသင်တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသနည်း။ အခုထိမင်းရဲ့အကြံဥာဏ်ကဘာလဲ အောက်တွင်မျှဝေပါနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားထွက်ကူညီကြကုန်အံ့။
ထုတ်ဖော်: PERQ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်စားလှယ်ရုံး.
Tags: အကြောင်းအရာစျေးကွက်interactive အကြောင်းအရာအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအကြောင်းအရာဆော့ဝဲအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအမျိုးအစားများအပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံများခဲပုံစံများခဲပုံစံများကိုသေပြီPERQ
AdPushup: သင်၏ Ad Ad Layouts ကိုထိန်းချုပ်ပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ